So Wubetumi Afa Onyankopɔn Adamfo Ankasa? | Bɛn
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1, 2. (a) Dɛn na nnipa pii bebu no sɛ entumi mma saa da, nanso dɛn awɛrehyem na Bible de ma yɛn? (b) Abusuabɔ a emu yɛ den bɛn na Abraham nyae, na dɛn ntia?
SƐ ƆSORO ne asase Bɔfo no ka kyerɛɛ wo sɛ, “Oyi ne m’adamfo” a, anka wobɛte nka dɛn? Nnipa pii fam no, wobebu no sɛ entumi mma saa da. Ɛbɛyɛ dɛn na onipa atumi ne Yehowa Nyankopɔn afa adamfo ma ayɛ yiye? Nanso, Bible ma yɛn awerɛhyem sɛ yebetumi abɛn Onyankopɔn ankasa.
2 Abraham a ɔtraa ase tete no nyaa abusuabɔ a ɛte saa. Yehowa kaa saa tete agya no ho asɛm sɛ ‘m’adamfo.’ (Yesaia 41:8) Yiw, Yehowa buu Abraham sɛ n’adamfo ankasa. Abraham nyaa saa abusuabɔ a emu yɛ den no efisɛ ‘ogyee Yehowa dii.’ (Yakobo 2:23) Ɛnnɛ nso, Yehowa hwehwɛ akwan a ɔbɛfa so aka wɔn a wofi ɔdɔ mu som no no “abata” ne ho. (Deuteronomium 10:15) N’asɛm hyɛ yɛn nkuran sɛ: “Mommɛn Onyankopɔn, na ɔbɛbɛn mo.” (Yakobo 4:8) Yehu ɔfrɛ ne bɔhyɛ bi wɔ nsɛm yi mu.
3. Dɛn na Yehowa to nsa frɛ yɛn sɛ yɛnyɛ, na bɔhyɛ bɛn na ɛbata ho?
3 Yehowa frɛ yɛn sɛ yɛmmɛn no. Wayɛ krado na ɔwɔ ɔpɛ sɛ obegye yɛn atom sɛ ne nnamfo. Bere koro no ara, ɔhyɛ bɔ sɛ sɛ yɛyɛ biribi a ɛbɛma yɛabɛn no a, ɔno nso bɛyɛ saa ara. Ɔbɛbɛn yɛn. Enti yebetumi ne no anya biribi a ɛsom bo mu kyɛfa—‘Yehowa tirim asɛm a obeyi akyerɛ yɛn.’ * (Dwom 25:14) “Tirim asɛm” twe adwene si agyina a wɔne adamfo titiriw bi tu so.
4. Ɔkwan bɛn so na wobɛkyerɛkyerɛ adamfo a wɔne no ka atirimsɛm mu, na ɔkwan bɛn so na Yehowa da no adi sɛ ɔyɛ adamfo a ɔte saa ma wɔn a wɔbɛn no no?
4 So wowɔ adamfo paa bi a wubetumi aka wo tirim asɛm akyerɛ no? Adamfo a ɔte saa ne nea odwen wo ho. Wowɔ ne mu ahotoso, efisɛ wada ne ho adi sɛ ɔyɛ ɔnokwafo. Sɛ wo ne no bom gye mo ani a, w’ani gye kɛse. Aso a ɔyɛ tie wo no ma w’awerɛhow so tew. Sɛ ɛba sɛ obiara nte w’ase mpo a, ɔno de ɔte wo ase. Saa ara na sɛ wobɛn Onyankopɔn a, wubenya Adamfo titiriw a obu wo ankasa, odwen wo ho yiye, na ɔte wo ase koraa. (Dwom 103:14; 1 Petro 5:7) Wufi komam de wo ho to no so, efisɛ wunim sɛ odi wɔn a wodi no nokware no nokware. (Dwom 18:25) Nanso, ɛyɛ Onyankopɔn na wama yɛanya hokwan yi a ɛma yetumi ne no di atirimsɛm no.
Yehowa Abue Kwan No
5. Dɛn na Yehowa yɛe a ɛma yetumi bɛn no?
5 Yɛn sɛ́ abɔnefo no, sɛ ɛkaa yɛn nko a, anka yentumi mmɛn Onyankopɔn da. (Dwom 5:4) Ɔsomfo Paulo kyerɛwee sɛ: “Na Onyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ yɛn no kyerɛ, efisɛ yɛda so yɛ nnebɔneyɛfo no, Kristo wu maa yɛn.” (Romafo 5:8) Yiw, Yehowa na ɔyɛɛ nhyehyɛe ma Yesu ‘de ne kra yɛɛ agyede maa nnipa pii.’ (Mateo 20:28) Gyidi a yɛkyerɛ wɔ saa agyede afɔre no mu no na ɛma ɛyɛ yiye sɛ yɛbɛbɛn Onyankopɔn no. Esiane sɛ Onyankopɔn “na ɔdɔɔ yɛn kan” nti, ɔno na ɔyɛɛ nhyehyɛe no ma yɛne no nyaa adamfofa.—1 Yohane 4:19.
6, 7. (a) Yɛyɛ dɛn hu sɛ Yehowa nyɛ obi a wahintaw, Onyankopɔn a wontumi nhu no? (b) Akwan bɛn so na Yehowa ayi ne ho adi akyerɛ?
6 Yehowa afa ɔkwan foforo so: Wayi ne ho adi akyerɛ yɛn. Adamfofa biara mu no, nea ɛma wɔbɛn wɔn ho kɛse no gyina hu a wohu obi yiye, na wonya obu ma ne su ahorow ne n’akwan no so. Enti sɛ Yehowa yɛ obi a wahintaw, Onyankopɔn a wonnim no a, anka yentumi mmɛn no da. Nanso, sɛ́ anka ɔde ne ho behintaw no, ɔpɛ sɛ yehu no. (Yesaia 45:19) Afei nso, obiara, yɛn a ebia wɔnam wiase no gyinapɛn ahorow so bu yɛn mpapahwekwaa no mpo nsa ka ne ho nsɛm a wayi no adi akyerɛ no.—Mateo 11:25.
Yehowa nam nneɛma a wabɔ ne ne Kyerɛwnsɛm so ayi ne ho adi
7 Ɔkwan bɛn so na Yehowa ayi ne ho adi akyerɛ yɛn? Nneɛma a wabɔ ma yehu ne nipasu afã bi—ne tumi kɛse, ne nyansa a emu dɔ, ne ne dɔ a ɛdɔɔso pii. (Romafo 1:20) Nanso ɛnyɛ nneɛma a Yehowa abɔ nkutoo so na ɔnam ayi ne ho adi akyerɛ. Sɛ́ Nkitahodifo Kɛse no, ɔma wɔkyerɛw ne ho a oyii no adi kyerɛe no ho nsɛm wɔ N’asɛm Bible mu.
‘Yehowa Animtew’ a Yebehu
8. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Bible ankasa yɛ ɔdɔ a Yehowa dɔ yɛn no ho adanse?
8 Bible ankasa yɛ ɔdɔ a Yehowa dɔ yɛn no ho adanse. Oyi ne ho adi wɔ ɔkwan a yebetumi ate ase so wɔ N’asɛm mu—adanse a ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔdɔ nko na ɔdɔ yɛn na mmom ɔpɛ sɛ yehu no na yɛdɔ no nso. Nea yɛkenkan wɔ nhoma a ɛsom bo yi mu no ma yetumi hu ‘Yehowa animtew,’ na ɛma yenya ɔpɛ sɛ yɛbɛbɛn no. (Dwom 90:17) Ma yensusuw akwan a ɛka koma a Yehowa nam so yi ne ho adi wɔ N’asɛm mu no bi ho.
9. Bible mu nsɛm tẽẽ a ɛda Onyankopɔn su ahorow adi ho nhwɛso ahorow bi ne dɛn?
9 Wɔaka Onyankopɔn su ahorow ho nsɛm tẽẽ wɔ mmeae pii wɔ Kyerɛwnsɛm no mu. Hyɛ nhwɛso ahorow bi nsow. “Yehowa dɔ atɛntrenee.” (Dwom 37:28, NW) Onyankopɔn ‘yɛ tumi mu ɔkɛse.’ (Hiob 37:23) “Ɔnokwafo ne me, Yehowa asɛm ni.” (Yeremia 3:12, NW) “Koma mu nyansafo.” (Hiob 9:4) Ɔyɛ “Onyankopɔn mmɔborohunufo ne ɔdomfoɔ, nea n’abodwo kyɛ na n’adɔeyɛ ne ne nokware dɔɔso pii.” (Exodus 34:6) “Na wo, [Yehowa, NW], wuye, na wode firi.” (Dwom 86:5) Na sɛnea yɛkaa ho asɛm wɔ ti a edi kan no mu no, su biako sen nea aka nyinaa: “Onyankopɔn ne dɔ.” (1 Yohane 4:8) Bere a wususuw su ahorow a ɛyɛ anigye yi ho no, so ɛntwe wo mmɛn Onyankopɔn a obiara ne no nsɛ no?
Bible boa yɛn ma yɛbɛn Yehowa
10, 11. (a) Dɛn na Yehowa de aba N’asɛm mu na aboa yɛn ma yɛahu ne nipasu yiye? (b) Bible mu nhwɛso bɛn na ɛboa yɛn ma yetumi yɛ Onyankopɔn tumi a ɛreyɛ adwuma ho mfonini wɔ yɛn adwenem?
10 Yehowa afi ɔdɔ mu de sɛnea ɔde ne su ahorow yi adi dwuma wɔ akwan pɔtee bi so ho nhwɛso ahorow aka ne su ahorow a wada no adi wɔ N’asɛm mu no ho. Kyerɛwtohɔ a ɛtete saa ma yetumi yɛ nneɛma ho mfonini wɔ yɛn adwenem, na ɛboa yɛn ma yehu ne nipasu afã horow yiye. Ɛno nso boa yɛn ma yɛbɛn no. Susuw nhwɛso bi ho hwɛ.
11 Ɛsono sɛ wobɛkenkan sɛ Onyankopɔn wɔ ‘ahoɔden kɛse.’ (Yesaia 40:26) Ɛnna ɛsono sɛ wobɛkenkan sɛnea ogyee Israel de wɔn faa Ɛpo Kɔkɔɔ no mu na afei ɔwowaw ɔman no wɔ sare no so mfirihyia 40 no ho asɛm koraa. Wubetumi ayɛ nsu a ɛreworo so a emu repae no ho mfonini wɔ w’adwenem. Wubetumi ayɛ ɔman no—ebia wɔn dodow nyinaa si 3,000,000—a wɔnam asase kesee so wɔ ɛpo no mfinimfini, na nsu a ayɛ nsukyenee wɔ wɔn nifa ne wɔn benkum sɛ afasu akɛse ho mfonini wɔ w’adwenem. (Exodus 14:21; 15:8) Wubetumi ahu ahobammɔ a Onyankopɔn de mae wɔ sare no so no. Nsu fii ɔbotan mu bae. Aduan a ɛte sɛ aba fitaa beguu fam hɔ. (Exodus 16:31; Numeri 20:11) Ɛha no, ɛnyɛ tumi nko na Yehowa da no adi sɛ ɔwɔ na mmom sɛ ɔde di dwuma ma ne nkurɔfo nso. So ɛnyɛ awerɛkyekye sɛ yebehu sɛ yɛn mpaebɔ kɔ Onyankopɔn a ɔwɔ tumi a ɔyɛ “yɛn guankɔbea ne ahoɔden, ahohia mu boafo pa a wɔanya no nhui” no nkyɛn?—Dwom 46:1.
12. Ɔkwan bɛn so na Yehowa boa yɛn ma ‘yehu’ no wɔ akwan a yebetumi ate ase so?
12 Yehowa a ɔyɛ honhom no ayɛ nneɛma pii a ɛbɛboa yɛn ma yɛahu no. Sɛ́ nnipa no, nneɛma a aniwa hu nkutoo na yetumi hu ma enti yentumi nhu honhom mu nneɛma. Sɛ Onyankopɔn ka ne ho asɛm kyerɛ yɛn wɔ honhom kwan so a, ɛbɛyɛ te sɛ nea worekyerɛkyerɛ obi a wɔwoo no onifuraefo sɛnea wote, nneɛma te sɛ w’ani kɔla anaa nsisii a ɛwɔ w’anim. Mmom no, Yehowa fi ayamye mu boa yɛn ma ‘yehu’ no wɔ ɔkwan a yebetumi ate ase so. Ɛtɔ mmere bi a, ɔde kasakoa ne ntotoho di dwuma, na ɔde nneɛma bi a yenim yɛ ne ho mfatoho. Ɔka ne ho asɛm mpo sɛ obi a ɔwɔ nnipa nkwaa bi. *
13. Dɛn ho mfonini na Yesaia 40:11 yɛ wɔ yɛn adwenem, na ɔkwan bɛn so na ɛka yɛn?
13 Hyɛ sɛnea wɔka Yehowa ho asɛm wɔ Yesaia 40:11 no nsow: “Ɔbɛyɛn ne nguankuw sɛ oguanhwɛfo, obeturu nguammaa ne basa so, na wasoa wɔn ne kokom; nguan mmaatan no, ɔbɛka wɔn brɛoo.” Ɛha no wɔde Yehowa toto oguanhwɛfo a ɔde ‘ne nsa’ ma nguammaa so ho. Eyi kyerɛ sɛnea Onyankopɔn tumi bɔ ne nkurɔfo ho ban na ɔboa wɔn, a wɔn a wɔyɛ mmerɛw paa no mpo ka ho. Yebetumi ate nka sɛ yɛwɔ ahobammɔ wɔ ne basa a ɛyɛ den no so, efisɛ sɛ yedi no nokware a, ɔrennyaw yɛn da. (Romafo 8:38, 39) Oguanhwɛfo Kɛse no soa ne nguammaa no wɔ “ne kokom”—asɛm a ɛkyerɛ soro atade a wɔhodwo no a ɛtɔ mmere bi a oguanhwɛfo de soa ne guammaa a wɔawo no foforo no. Enti wɔama yɛn awerɛhyem sɛ Yehowa ani sɔ yɛn na ɔyɛ yɛn brɛbrɛ. Ɛnyɛ nwonwa sɛ yɛn ani begye ho sɛ yɛbɛn no.
“Ɔba no Pɛ sɛ Oyi No Adi Kyerɛ”
14. Dɛn nti na yebetumi aka sɛ Yehowa nam Yesu so yi ne ho adi kyerɛ wɔ ɔkwan a ɛsen biara so?
14 Yehowa nam ne Dɔba Yesu so yi ne ho adi kyerɛ wɔ ɔkwan a ɛsen biara so wɔ N’asɛm mu. Obiara ntumi nna Onyankopɔn adwene ne ne nkate adi yiye anaasɛ ontumi nkyerɛkyerɛ sɛnea Ɔte mu yiye nsen nea Yesu yɛe no. Anyɛ yiye koraa no, saa Abakan no ne N’agya trae ansa na wɔrebɔ ahonhom abɔde ne amansan yi. (Kolosefo 1:15) Ná Yesu nim Yehowa yiye. Ɛno nti na otumi kae sɛ: “Obi nnim nea ɔba no yɛ, gye agya no. Nanso obi nnim nea agya no yɛ, gye ɔba no ne nea ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no.” (Luka 10:22) Bere a na Yesu wɔ asase so sɛ onipa no, oyii N’agya adi kyerɛe wɔ akwan titiriw abien so.
15, 16. Akwan abien bɛn na Yesu nam so yii N’agya adi kyerɛe?
15 Nea edi kan no, Yesu nkyerɛkyerɛ boa yɛn ma yehu N’agya no. Yesu kaa Yehowa ho nsɛm wɔ ɔkwan a ɛka yɛn koma so. Sɛ nhwɛso no, bere a Yesu rekyerɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ mmɔborohunufo a ɔsan gye nnebɔneyɛfo a wonu wɔn ho mu no, ɔde Yehowa totoo agya bi a ɔwɔ fafiri a bere a ohui sɛ ne ba hohwini resan aba no, ɛkaa no kɛse ma otuu mmirika kosoo ne kɔn mu na ofew n’ano no ho. (Luka 15:11-24) Yesu kaa Yehowa ho asɛm nso sɛ Onyankopɔn a ‘ɔtwe’ nnipa komapafo esiane sɛ ɔdɔ wɔn sɛ ankorankoro nti. (Yohane 6:44) Onim bere a akasanoma ketewaa mpo hwe fam no. Yesu kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: “Munnsuro! Mosen nkasanoma bebree.” (Mateo 10:29, 31) Akyinnye biara nni ho sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛn Onyankopɔn a odwen yɛn ho saa no.
16 Nea ɛto so abien no, Yesu nhwɛso kyerɛ yɛn sɛnea Yehowa te. Yesu daa N’agya su adi araa ma otumi kae sɛ: “Nea wahu me no ahu agya no.” (Yohane 14:9) Enti, sɛ yɛkenkan Yesu ho asɛm wɔ Nsɛmpa no mu—nkate a ɔdaa no adi ne sɛnea ɔne afoforo dii no—a, ɔkwan bi so no, na sɛnea N’agya te ankasa na yɛrehu no. Yehowa ntumi nyi ne su ahorow adi pefee wɔ ɔkwan foforo biara so nsen saa da. Dɛn ntia?
17. Yɛ nea Yehowa ayɛ de boa yɛn ma yɛte sɛnea ɔte no ase ho mfatoho.
17 Sɛ yɛbɛyɛ mfatoho a: Fa no sɛ worekyerɛkyerɛ sɛnea ayamye te mu. Ebia wode nsɛm bɛkyerɛkyerɛ mu. Nanso sɛ wutumi kyerɛ obi a ɔreda ayamye ankasa adi na woka sɛ, “Ayamye ho nhwɛso ni a,” asɛmfua “ayamye” no nya ntease foforo na asete bɛyɛ mmerɛw. Yehowa ayɛ biribi a ɛte saa de aboa yɛn ma yɛahu sɛnea ɔte. Bere a ɔde nsɛm kyerɛkyerɛ sɛnea ɔte mu no, ɔnam ne Ba no so ama yɛn nhwɛso ankasa. Onyankopɔn su ahorow no da adi wɔ Yesu mu. Yehowa nam Nsɛmpa no so ka Yesu ho asɛm sɛ: “Saa na mete.” Ɔkwan bɛn so na kyerɛwsɛm a efi honhom mu no ka Yesu ho asɛm bere a na ɔwɔ asase so no?
18. Ɔkwan bɛn so na Yesu daa su ahorow a ɛne tumi, atɛntrenee, ne nyansa adi?
18 Onyankopɔn su atitiriw anan no daa adi fɛfɛɛfɛ wɔ Yesu ho. Ná ɔwɔ yare, ɔkɔm, ne owu mpo so tumi. Nanso, esiane sɛ ɔnte sɛ nnipa pɛsɛmenkominyafo a wɔde wɔn tumi di dwuma wɔ ɔkwammɔne so no nti, wamfa tumi a ɔde yɛ anwonwade no anyɛ biribi amma ne ho anaasɛ wamfa ampira afoforo da. (Mateo 4:2-4) Ɔdɔɔ atɛntrenee. Abufuw a wɔfa no trenee kwan so hyɛɛ ne koma so bere a ohui sɛ aguadifo asisifo resisi nkurɔfo no. (Mateo 21:12, 13) Wanyɛ nyiyim antia ahiafo ne wɔn a wɔhyɛ wɔn so no, na ɔboaa saafo no ma ‘wonyaa ɔhome’ maa wɔn kra. (Mateo 11:4, 5, 28-30) Ná nyansa a ɛso bi nni wɔ Yesu a na “ɔsen Salomo” no nkyerɛkyerɛ mu. (Mateo 12:42) Nanso Yesu amfa ne nyansa anhoahoa ne ho da. Ne nsɛm duu mpapahwekwaa komam, efisɛ na ne nkyerɛkyerɛ mu da hɔ, asete nyɛ den, na na wotumi de yɛ adwuma.
19, 20. (a) Ɔkwan bɛn so na na Yesu yɛ ɔdɔ ho nhwɛso a ɛda nsow? (b) Bere a yɛkenkan Yesu nhwɛso na yesusuw ho no, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
19 Ná Yesu yɛ ɔdɔ ho nhwɛso a ɛda nsow. Wɔ ne som adwuma nyinaa mu no, ɔdaa ɔdɔ adi wɔ akwan pii so, a na tema ne ayamhyehye ka ho. Wantumi anhwɛ afoforo amanehunu a ne yam anhyehye no. Mpɛn pii na ayamhyehye a ɛte saa kaa no ma ɔyɛɛ ade. (Mateo 14:14) Ɛwom sɛ Yesu saa ayarefo yare maa wɔn a ɔkɔm de wɔn aduan de, nanso ɔdaa ayamhyehye adi wɔ ɔkwan a ehia sen saa koraa so. Ɔboaa afoforo ma wohuu Onyankopɔn Ahenni a ɛde nhyira bɛbrɛ adesamma daa no ho nokware no, ma wogye toom, na wɔn ani gyee ho. (Marko 6:34; Luka 4:43) Nea ɛsen ne nyinaa no, Yesu daa ahofama a efi ɔdɔ mu adi denam ne kra a ɔde too hɔ maa afoforo no so.—Yohane 15:13.
20 So ɛyɛ nwonwa sɛ nnipa a ɛsono mfe a wɔadi ne abusua a wofi mu nyinaa baa ɔbarima a odwo na ɔda nkate a emu yɛ den yi nkyɛn no? (Marko 10:13-16) Nanso, bere a yɛkenkan Yesu nhwɛso pa ho asɛm na yesusuw ho no, momma yɛnkae bere nyinaa sɛ yehu Agya no su pefee wɔ Ɔba yi mu.—Hebrifo 1:3.
Adesua Nhoma a Ɛbɛboa Yɛn
21, 22. Dɛn na ɛka Yehowa a yɛbɛhwehwɛ no no ho, na dɛn na ɛwɔ adesua nhoma yi mu a ɛbɛboa yɛn ma yɛayɛ eyi?
21 Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa nam ne ho adi a oyi kyerɛ pefee wɔ N’asɛm mu so no da no adi sɛ ɔpɛ sɛ yɛbɛn no. Bere koro no ara no, ɔnhyɛ yɛn sɛ yɛne no mmenya abusuabɔ a ɔdom wom. Ɛyɛ yɛn na ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ Yehowa ‘bere a ɔma yehu no no.’ (Yesaia 55:6) Nea ɛka Yehowa a yɛbɛhwehwɛ no ho ne ne su ahorow ne n’akwan a wada no adi wɔ Bible mu a yebehu no. Wɔayɛ adesua nhoma a worekenkan yi na aboa wo ma woatumi ayɛ eyi.
22 Wubehu sɛ wɔakyekyɛ nhoma yi mu ayɛ no afã horow a ɛne Yehowa su atitiriw anan: tumi, atɛntrenee, nyansa, ne ɔdɔ, hyia. Wɔde su no ho nkyerɛkyerɛmu tiawa na efi ɔfã biara ase. Ti ahorow kakra a edi hɔ no susuw sɛnea Yehowa da saa su no adi wɔ akwan horow so ho. Eti bi wɔ ɔfã biara a ɛkyerɛ sɛnea Yesu daa saa su no adi, na eti bi nso kyerɛkyerɛ sɛnea yɛn nso yebetumi ada no adi wɔ yɛn asetra mu no mu.
23, 24. (a) Kyerɛkyerɛ ɔfã titiriw a wɔato din “Nsɛmmisa a Ɛsɛ sɛ Wususuw Ho” no mu. (b) Ɔkwan bɛn so na nsusuwho boa yɛn ma yɛbɛn Onyankopɔn?
23 Efi eti yi so rekɔ no, ɔfã titiriw bi wɔ hɔ a wɔato din sɛ “Nsɛmmisa a Ɛsɛ sɛ Wususuw Ho.” Sɛ nhwɛso no, hwɛ adaka a ɛwɔ kratafa 24 no. Wɔamfa kyerɛw nsɛm ne nsɛmmisa no amma sɛ nea wɔde reyɛ eti no mu ntĩmu. Mmom no, n’atirimpɔw ne sɛ ɛbɛboa wo ma woasusuw asɛm no afã foforo a ɛho hia ho. Ɔkwan bɛn so na wubetumi de ɔfã yi adi dwuma yiye? Hwɛ kyerɛw nsɛm a wɔatwe adwene asi so no mu biara, na kenkan nkyekyɛm ahorow no yiye. Afei susuw asɛmmisa a ɛka kyerɛwsɛm biara ho no ho. Susuw mmuae ahorow no ho. Wubetumi ayɛ nhwehwɛmu bi. Bisa wo ho nsɛm foforo: ‘Yehowa ho asɛm bɛn na asɛm yi ka kyerɛ me? Ɔkwan bɛn so na ɛfa m’asetra ho? Ɔkwan bɛn so na metumi de adi dwuma de aboa afoforo?’
24 Nsusuwho a ɛte saa betumi aboa yɛn ma yɛakɔ so abɛn Yehowa kɛse. Dɛn ntia? Bible de nsusuwho bata koma no ho. (Dwom 19:14) Sɛ yɛde anisɔ susuw Onyankopɔn ho ade a yesua no ho a, nsɛm no sian kɔ yɛn sɛnkyerɛnne kwan so koma no mu, baabi a ɛka yɛn nsusuwii, ɛkanyan yɛn nkate, na awiei koraa no, ɛma yɛyɛ biribi no. Onyankopɔn ho dɔ a yɛwɔ no mu yɛ den, na saa ɔdɔ no nso ka yɛn ma yenya ɔpɛ sɛ yɛbɛsɔ n’ani sɛ yɛn Adamfo pa a yɛdɔ no. (1 Yohane 5:3) Sɛ yebenya abusuabɔ a ɛte saa a, ɛsɛ sɛ yehu Yehowa su ahorow ne n’akwan. Nanso, nea edi kan no, ma yensusuw Onyankopɔn nipasu a ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛbɛn no no ho—ne kronkronyɛ.
^ nky. 3 Yebetumi ahyɛ no nsow sɛ wɔde Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “tirim asɛm” no adi dwuma wɔ Amos 3:7, na ɛka sɛ Amansan Hene Yehowa yi “n’agyina” adi kyerɛ n’asomfo, na ɔma wodi kan hu nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ.
^ nky. 12 Sɛ nhwɛso no, Bible ka Onyankopɔn anim, n’aniwa, n’aso, ne hwene mu, n’ano, ne nsa, ne ne nan ho asɛm. (Dwom 18:15; 27:8; 44:3; Yesaia 60:13; Mateo 4:4; 1 Petro 3:12) Ɛnsɛ sɛ yɛfa sɛnkyerɛnne kwan so nsɛm no sɛ ɛte saa ankasa, sɛnea yɛremfa ka a wɔka Yehowa ho asɛm sɛ “ɔbotan” anaa ‘ɔkyɛm’ no ara pɛ no.—Deuteronomium 32:4; Dwom 84:11.
Dwom 15:1-5 Dɛn na Yehowa hwehwɛ fi wɔn a wɔpɛ sɛ wɔyɛ ne nnamfo no hɔ?
Dwom 34:1-18 Henanom na Yehowa bɛn wɔn, na awerɛhyem bɛn na saafo no betumi anya?
Dwom 145:18-21 Nneɛma bɛn na yɛyɛ a ɛbɛma yɛabɛn Yehowa?
2 Korintofo 6:14–7:1 Nneyɛe bɛn na ɛho hia na ama yɛakɔ so ne Yehowa anya abusuabɔ a emu yɛ den?
Enti Yehowa Dwen Wo Ho Ampa?
Wunnye nni sɛ wo ho hia Onyankopɔn anaa? Yesu nsɛm a ɛwɔ Yohane 6:44 no ma yehu sɛ Onyankopɔn dwen obiara ho.